Mgbe ịkagbuchara ihe Jupita, ihe Netflix kwesiri idebe ndi ocha?
Nkpochapụ nke ihe Jupita nwere izu a - ma ọ bụ opekata mpe, nkwenye na agaghị enwe oge nke abụọ, mana kama ihe ngosi ejikọrọ akpọrọ Supercrooks - n abụghị ihe a na-atụghị anya ya. Ihe kpatara nke ahụ bụ n'ihi na anyị ejirila ịkagbu ihe ngosi sitere na Netflix, n'agbanyeghị na ha yiri ka ọ dị ọkwa nke ọma na chaatị 10 kachasị ngwa. Mana ihe Jupita enwetaghị ndị nkatọ, n'agbanyeghị na anyị chere na oge nke abụọ nwere ọtụtụ ikike dabere na njedebe nke oge mbụ .
Onye Hollywood Reporter si Borys Kit , ihe ngosi a furu $ 200 nde iji mee. Ọ dịkwa ogologo oge na-abịanụ: E wepụtara foto nke usoro a dị ka ọnwa Julaị 2019. Ọ bụ nnukwu nkwa maka usoro superhero a na-amaghị ama, na o doro anya na akwụghị ụgwọ Netflix ga-esi ebe ahụ gawa. oge nke abụọ.
Ya mere, gịnị bụ ihe ahụe nke ahụ arụghị ọrụ? N'ikwu eziokwu, ọkwa izu a dị oke mgbagwoju anya. Karịsịa,
Oge ngwụcha akụkọ naanị na Jupita's The Disappearance of Legacy never used the word "Cancel" ma ọ bụ "akagbuo" - mana ịtọhapụ ndị na-eme ihe nkiri na nkwekọrịta ha na ịgaghị eme oge nke abụọ bụ nkọwapụta nke a kagburu mmemme onyonyo.
Anyị anaghị emegide echiche nke ihe ngosi ọzọ etinyere na otu eluigwe na ala, na ịtụgharị Legacy Jupiter ka ọ bụrụ akụkọ mgbe ochie. B mana o siri ike iju anya - ọ bụrụ na ihe nkiri a gara nke ọma n’eziokwu, Netflix agaghị eme karịa? na ha ga-alaghachi n'ihe nketa Jupita n'ọdịniihu, na Oge Ikpeazụ na-ekwu maka isi mmalite na ọ nwere ike ịlaghachi n'ụdị ọzọ. Ọzọkwa, n'agbanyeghị: Netflix nwere nhọrọ ịme ọtụtụ nke otu ihe ngosi ahụ wee họrọ ịghara ime.
MeNetflix mara mma na-egosi
Ihe anyị maara banyere
Oge ndị ọbịa oge 4
Oge Witcher 2 kọwara
Ihe karịrị akarị na ọdịnaya?
O siri ike ịghara iche ma ọ bụrụ na ihe Jupiter nwere otu afọ gafere oge maka ahịa. N'ime ụwa ebe anyị nwere ihe ngosi TV dị ịtụnanya ma dị oke ọnụ na Disney Plus -
na onye nwere nsonaazụ ọzọ agwakọta - Ihe ngosi Netflix chere ihu ntụnyere siri ike na ndị dike ndị ọzọ akara ngosi. .
Ntughari akwukwo obere ihe eji eme ihe emeela ogologo oge kemgbe 2012, mgbe Arrow mara mma nke ukwuu naanị egwuregwu na obodo, na Netflix na-asọmpi na iyi nke nwere akpa miri emi na ihe odide nke ndị na-ekiri etinyela ego . Ihe nkiri TV Superhero na-adị ngwaỌ ghọwo agbụrụ agbụrụ n'etiti ndị iyi ahụ, na HBO Max na-enye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ihe ngosi nke
Green Lantern , Batman na Suides Squad universes. Ka ọ dị ugbu a, ọ dịka ọ dịka etinyekwara ego iji mee ka ihe ngosi TV ya rụọ ọrụ ka ọ na-eme na fim ya. Na ngụkọta, anyị na-atụ anya ihe ngosi MCU isii ga - ewepụta n’afọ a, ya na Hawkeye na Nwada Marvel na - akwado mbubreyo 2021. Nke ahụ bụ igwe mmadụ ji ọrụ n’aka - nke ahụ anaghịkwa agụpụta ihe ngosi ọ bụla. Arrowverse, dị ka Flash na Superman na Lois.
Ihe Nketa Jupita, mgbe ahụ, enweghị ike ijide ya, yana
38% nyocha dị mma
site na ndị nkatọ na Tomato rere ure.
N'ezie, anyị echeghị na saturation dị ike bụ esemokwu, ebe a - lelee otu ihe ọjọọ Invincible data dị na Amazon Prime Video, na-adọrọ uche gaa na ya. ntị na ya ọbara gbagọrọ agbagọ na ụdị ọhụụ ejirinime. Onye a nwere ihe di egwu nke aha ndi mmadu aha ya, Otu ọ di, na o dabere na akwukwo egwu a ma ama nke nwere 15 afọ nke akuko.
Isi mmalite maka ihe nketa Jupita bụ ihe dị ike maka mmegharị, na ilele ya. Millar enweela ọganiihu a na-enwetụbeghị ụdị ya dịka onye na-emepụta akwụkwọ na-atọ ọchị n'oge a ma soro ụfọdụ ndị na-ese ihe kachasị egwu n'ụwa rụọ ọrụ. Ihe omuma Jupita bu mmekorita ya na Frank Quitely, nke doro anya na o bu onye okacha mara nma nke oge ya. Ebumnuche - nke ndị dike na ọgbọ na ihe ịma aka nke ịgafe ọwa - dị mma nke ọma, ọ bụghịkwa ihe anyị hụrụla ka emegharịrị tupu. Na mpempe akwụkwọ, ọ kwesịrị ịrụ ọrụ.
N’ikpeazụ, naanị Netflix maara ihe kpatara ihe Jupiter ji baa uru na - eyigharị - a na-amata iyi iyi naanị ọnụ ọgụgụ ndị na-ege ntị mgbe ọ na-ekwu maka nnukwu hi. Dị ka Nielsen si kwuo (site na THR
), nam na-atụle ọkwa na United States dabere na nlele ndị na-ege ntị, Ihe Nketa Jupita bụ ihe ngosi ikuku kachasị elu n'izu mbụ ya. E lere nkeji 696 na May 9 (ihe nkiri malitere na May 4).
Nọmba a adịghị ada dị njọ - mana ọ naghị agwa anyị mmadụ ole gụchara ihe nkiri ahụ niile, ma ọ bụ nyefee mgbe otu na abụọ gachara, yabụ ejiri ya.
O siri ike ikwu ihe ndị na-ege ntị jiri ihe Nkume Jupiter mee n'ozuzu ya, na otu ihe nkiri a siri baa n'echiche sara mbara. Na nlele, ihe ngosi ahụ nwere akara njirimara dị ala nke 6.8 na IMDb nke ihe dị ka ndị ọrụ 25,000, ma e jiri ya tụnyere 7.2 maka Falcon na Winter Soldier nke ndị ọrụ 106,000. Na Tomato rere ure, n’agbanyeghi, onye ọ bụla nwere ụdị oji o f 7.2. Enweghị ọtụtụ ihe ị ga-amụta na nke a, anyị na-atụkwa anya Marvel na-adọta ntuli aka ndị ọrụ karịa onyinye ọhụrụ Netflix.
Maka ihe ndekọ ahụ, ọ dị ka usoro ahụ enwetabeghị otu ihe nzuzo ọdịnala dịka Netflix ọzọ dị ka Bridgerton ma ọ bụ
Cobra Kai , ma ọ bụ Mare nke Easttown na-adịbeghị anya site na HBO Anaghị etinye ya na data ọ bụla, ka o doo anya. Mana ọ naghị adị ka ngosipụta nke ọdịbendị mere ka ọ pụta ìhè Bomụ nwoke
mere maka Amazon Prime Video na 2019, ihe ngosi ọzọ dabere na akụ na-abụghị nke oke.
Oge ụfọdụ ihe ndị a na-ebi ndụ nke ha, dị ka onyinye nke Helmut Zemo ịgba egwu na ụlọ ịgba egwu abalị. Ọ naghị adị ya ka ngosipụta a erutela ọkwa ahụ.
Kedu ihe nke a gbasara Netflix?
Oge ọ bụla Netflix kagburu ihe ngosi, nzaghachi na soshal midia bụ otu - gịnị kpatara itinye ego na ya ọhụrụ Netflix usoro, ma ọ bụrụ na mIhe a ọ ga - emebi ya naanị Ọ dị ka nyocha dị mma. Gini mere ị gaghị eme usoro mechiri emechi ma ọ bụrụ na ị jighị n'aka na ị nwere ego iji gụchaa akụkọ a?
Ebe ọ bụ na Netflix agbapụtala nnukwu ihe ngosi abụọ dị elu n'usoro Ndị Irregulars na ihe Jupita's Legacy , ụzọ o si kagbuo bụ nke puru iche karịa mgbe ọ bụla. Site na ntinye akwukwo, enwere ndakpọ olileanya na itinye ego na ihe ngosi wee hụ ya ka ọ were anyụike.
Otu na-eche ọtụtụ Netflix setịpụrụ ihe ịga nke ọma - ma ọ bụrụ na ọ bụrụ ihe dị iche ma ọ bụrụ na ihe ngosi na-eji nwayọ chọta ndị na-ege ntị ka oge na-aga, ọkachasị ebe ndị Irregulars na Jupiter nwere ihe ha na -enwu anyụike izu ole na ole ka ha bidoro.
Nnwale dị n'imeisi ga-
Nmegharị Netflix maka Neil Gaiman's Sandman ndị na-atọ ọchị
, usoro nke nwere akara ọdịnala buru ibu karịa nke ndị na-atọ ọchị Jupita. Anyị maara na nke a ga-abụ ihe ngosi dị oke ọnụ, naanị dabere na nkedo. O nwere uru abuo nke ịdabere na akwukwo egwu di egwu na otutu oru nke onye edemede a ma ama site na Gaiman. N'ebe a na-ahụkarị nke ọma, ọ na-enye Netflix ihe ederede dị egwu nke nwere ike ịpụta, ọkachasị mgbe afọ ole na ole sochirinụ na-egosi ihe ijuanya na ngosi TV TV.
Ọ bụghị n'ezie ihe ngosi nke superhero - na n'etiti nhichapụ ọhụrụ ahụ na idobe ihe ịtụnanya ya gosipụtara afọ ole na ole gara aga, ọ dị ka Netflix anaghị eme mkpọtụ na ụdị a ugbu a. Hey, ma eleghị anya, ụwa nke ihe Jupita ga-anọrịrị na nke abụọ nke isiele ndị ajọ omume anya. Maka anyị, anyị gaara enwe mmasị na Netflix agaala oge nke abụọ nke sho a na itinye ego dị ukwuu, naanị iji hụ ma ọ ga - ahụ ụkwụ ya nke ọma - mana o doro anya na nke ahụ apụtaghị.
Ọrụ gụgharia kachasị mma tụnyere
Anton du beke ga-esonyere ndị ikpe nke usoro ọhụụ
2021-06-24 15:48:12 | ọhụrụ
Bruno Tonioli enweghị ike ịbụ onye ọka ikpe n'ihi na ọ nweghị ike ịgafe United States n'ihi mmachi Covid. ...
Ikike ọhụrụ iji weghara mmanya na bournemouth, christchurch na poole
2021-06-24 15:46:39 | ọhụrụ
Ndị uwe ojii na ndị isi ga-enwe ike inye ndị nwere agwa mmegide iwu ka ha nyefee mmanya ha. ...